२०७४ जेठ १८ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
धूमपानरहित दिवसको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिबाटै विरोध
विश्व धूमपान तथा सुर्तीरहित दिवसमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साले सहभागी अतिथिहरूलाई प्लास्टिकको गिलासमा चिया वितरण गरेको थियो । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्यमा पनि प्लास्टिकजन्य पदार्थमध्ये झोला, गिलास आदिको प्रयोगमा रोक लगाइएकोमा चिया प्लास्टिकको गिलासमा वितरण गर्दा सहभागी सञ्चारकर्मी र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सप्रजिअ पौडेलले सोको विरोध गरेका थिए । जो अगुवा उही बाटो हगुवा भनेर प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्नुपर्ने कार्यालयले उल्टो त्यसो गर्नु हास्यास्पद भएको उनको तर्क थियो । प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साले विश्व धूमपान तथा सुर्तीरहित दिवस औपचारिकता पूरा गर्न मात्र मनाएको भन्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहायक प्रजिअ दुर्गादत्त पौडेल कार्यक्रमस्थलमैं पडकिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साले ३१ मेमा मनाइने विश्व धूमपान तथा सुर्तीरहित दिवस कार्यालयको बन्द कोठाभित्र मनाएको भन्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सप्रजिअ पौडेल रिसाएका थिए । उनले सार्वजनिक चासोको विषय रहेको धूमपान तथा सुर्तीरहित दिवस
काङ्ग्रेसको ¥यालीमा राजपाको अवरोध
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ दोस्रो चरणको निर्वाचन सन्दर्भमा आज नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साले ग्रामीण क्षेत्रमा निकालेको मोटरसाइकल ¥यालीमा राजपा, नेपाल पर्साका कार्यकर्ताहरूले केही स्थानमा अवरोध गरेको र झौवामा दुई पक्षबीच भिडन्तसमेत भएको समाचार छ । मोटरसाइकल ¥यालीको क्रममा बिहान ८ बजे झौवा पुगेको ¥यालीलाई राजपाका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजेका थिए । चुनाव बहिष्कार गरेका राजपाले झन्डासहित गाउँमा मोटरसाइकल ¥याली निकालेकोमा आपत्ति गर्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपको क्रममा ¥याली सहभागी एउटा मोटरसाइकल क्ष्Fतिग्रस्त भएको स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय प्रहरीले सामान्य विवाद भएको र पछि ¥याली आप्mनो गन्तव्यतर्पm लागेको जनाएको छ । यसैगरी बहुदरामाई गाउँपालिकामा पनि ¥याली निकालिएकोमा भौराटार मन्दिर अगाडि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । नेकाले निकालेको मोटरसाइकल ¥याली पर्साको नगरदाहा, पोखरिया, विश्रामपुर हुँदै जाने क्रममा भौराटार चोकमा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । संविधान संशोधनबिना मधेसको माग पूरा नहुने र यो अवस्थामा मधेसमा कुनै निर्वाचनको गतिविधि हुन नदिने भन्दै अवरोधकर्ताले काङ्ग्रेसको मोटरसाइ
ठेकेदारको काम गर्दै म्यादी प्रहरी
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ स्थानीय तह निर्वाचनको लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई ठेकेदारको काममा खटाएको पाइएको छ । विन्दवासिनीदेखि बहुअर्वाभाठासम्म निर्माण भइरहेको कालोपत्रे सडक निर्माणमा म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको पाइएको छ । ठेकेदारले कालोपत्रे निर्माण गर्दा आप्mनो कारिन्दा खटाउनुपर्नेमा म्यादी प्रहरी खटाएकोबारे पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता चक्रराज जोशीसँग बुझ्दा उनले गलत भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । ठेकेदारको काममा म्यादी प्रहरी खटाउने कुनै आवश्यकता नभएको र त्यस्तो भएको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित चौकीका इन्चार्जलाई कारबाई गर्ने उनले बताए । विन्दवासिनी–बहुअर्वाभाठा सडकखण्डमा खटेका म्यादी प्रहरीले चौकीको आदेशमा सवारी साधनको जाम नलागोस भनी खटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पर्साको पाँचै निर्वाचन क्षेत्रमा २०० का दरले घर निर्माण हुने
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ जनता आवास कार्यक्रमको बैठक बसी सदस्य मनोयन गर्नुको साथै जनता आवास कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाँचवटै निर्वाचन क्ष्Fेत्रमा २०० का दरले भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा सम्पन्न बैठकले जनता आवास समन्वय समितिमा रिक्त रहेको दुई पदमा लक्षित वर्गका तर्फबाट बुनेल राम, बृजलाल पासवानलाई सदस्य मनोनीत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले पर्सा जिल्लाको पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा २०० का दरले १ हजार घर निर्माण गर्न तत्काल समिति बनाउने र सम्झौता गरी काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । बैठक जनता आवास कार्यक्रम पर्साका अध्यक्ष्F सांसद राजेन्द्रबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा बसेको थियो भने बैठकमा सांसद विचारी यादव, सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे, प्रमुख मालपोत अधिकृत सनत द्विवेदी, खानेपानीका इन्जि. दिनेशप्रसाद साह, वनका प्रतिनिधि वशिष्टनारायण पटेललगायतको उपस्थिति रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साका इन्जिनियर सबरे आलमले बताए ।
नजिकिंदै मोफसलको राजधानी सपना
सञ्जय साह मित्र नयाँ बजेटमा आधा नागरिकका लागि राजधानी नजिक हुने सपना साकार हुने आश्वासन बाँडिएको छ । आगामी वर्षदेखि मध्य तथा पूर्वका नागरिकका लागि राजधानीलाई निकै नजिक बनाउने पुराना दुई सपना साकार बनाउने दिशामा नयाँ कदम चालिएका छन् । धेरै वर्षदेखि चर्चाको रूपमा रहेको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग शिलान्यास गरिएको भोलिपल्ट सरकारले ल्याएको बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको थियो । ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएदेखिको अवस्थामा द्रूतमार्ग कसले बनाउने भन्ने विषयमा निकै लामो विवाद चल्यो । कहिले कसको जिम्मा, त कहिले कसको साझेदारीमा, त कहिले कुन संस्थाको ऋण र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने बहस, चर्चा र विवादमा रहेको द्रुतमार्गको निर्माण नेपालले नै गर्ने निर्णय भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा यसले निकै ठूलो बजेट पाउने निश्चित भएको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण गरिने द्रुतमार्गमा धेरैवटा चारको संयोग भएको छ । चार वर्षमा निर्माण गरिने लक्ष्य, चार लेनको व्यवस्थित हुने, चार अक्षरको द्रुतमार्गको शिलान्यास चौहत्तरमा भएर चौहत्तरमैं पेश गरिएको बजेटले
दाइजो नियन्त्रणमैं समस्या
दाइजोप्रथाको लामो समयदेखि विरोध हुँदै आए पनि यसले हाम्रो समाजमा द¥होगरी जरो गाडेको कारण उन्मूलन त परै जाओस्, नियन्त्रणसम्म हुन सकेको छैन । दाइजो लिन र दिन हुन्न भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा समाजका सबै तह र तप्काका मानिसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्, तर उनीहरूबाटै दाइजो लिने काम पनि भइरहेको छ । दाइजो प्रचलनमा एक मात्र भिन्नता आएको छ त्यो के त भने हाकाहाकी लिइन्थ्यो भने अहिले गोप्य, अनि लुकाछिपी तरिकाबाट लिइन्छ । पढेलेखेका मानिसमा पनि दाइजो प्रथाको आकर्षण किञ्चित घटेको छैन । यसमा उनीहरू संस्कार, परम्परा र पुरानो युगको धङधङी खोज्छन् । स्वार्थलाई धार्मिक र सामाजिक परम्पराको जामा पहिराउँछन् र तल्लो वर्गमा आप्mनो तार्किक शक्तिको प्रभाव पार्छन् । पर्सा र बाराको मात्र सन्दर्भ हेर्दा प्रहरीमा आउने महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा ७५ प्रतिशत दाइजोको कारण हुन्छ । विवाह हुने बखत दाइजो लेनदेनको कुरा घरपरिवारका सदस्यहरूबाट लुकाइन्छ । घरका ठूलाठालूहरूबीच दाइजो तय हुने र गोप्य लेनदेनबाट विवाह सम्पन्न हुन्छ । दाइजो दिने र लिने काम भएको कुरा त्यतिखेर मात्र उजागर गरिन्छ जब कुनै विवाहित महिलाको
२०७४ जेठ १७ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
आव २०७४/०७५को बजेट प्रचारमुखी ः वीरगंजवासी
प्रस, वीरगज, १६ जेठ/ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि ल्याएको बजेट जनमुखी नभएको वीरगंजका उद्योगी, व्यपारी र अर्थविद्हरूले बताएका छन् । उनीहरूले बजेटमा महŒवाकाङ्क्षी योजनाहरू समेटिएको भन्दै बजेटको कार्र्यान्वयनमा पनि आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलको अडान र आचार संहिताका कारण नयाँ योजना र कार्यक्रम नसमेटिएको बजेट वीरगंजलगायत मधेसका लागि उपलब्धिमूलक नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । अहिलेको बजेट गरिब किसान, मजदुर, कर्मचारी कसैको पक्षमा पनि छैन, वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक ताराबहादुर थापाले बताए । अहिलेको बजेट वितरणमुखी मात्रै लाग्यो, विभिन्न शीर्षकमा कनिका छरे जस्तै रकम विनियोजन गरिएको छ । उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने टिप्पणी पनि गरे । अर्थविद् इन्दुशङ्कर मिश्रले पनि संवैधानिक बाध्यताको आधारमा ल्याइएको बजेटमा कुनै नयFँ कार्यक्रम र योजना नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बजेट यथास्थितिवादी छ, पुरानै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षमा आशङ्का देखिन्छ– मिश्राले भने । स्थानीय सरकारलाई करिब अ
रामजानकीको जग्गामा निर्माण शुरु, एडिबीको नाला निर्माण प्रभावित हुन सक्ने
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ विवादित रामजानकी मन्दिरको जग्गामा उच्च अदालत वीरगंजले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुनः निर्माण कार्य शुरु भएको छ । हाल वीउमनपा–९, गीता मन्दिरदेखि पूर्वपट्टीको रामजानकी मन्दिरको जग्गामा पिपि इन्भेस्टमेन्ट बैंक ललितपुरले व्यापार प्रयोजनको लागि काम शुरु गरेको हो । उच्च अदालत जनकपुरको इजलास वीरगंजले गत चैत १४ गते पुनरावेदनको म्यादसमेत जारी नगरी वीउमनपाको नक्शा बदर निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्दै रामजानकी मन्दिरकी संरक्षिका सुशीला ब्राह्मणी र धीरनारायण शर्मालाई काम गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको हुनाले त्यहाँ काम शुरु गरिएको बताइएको छ । वीउमनपाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले २०७३ साउनमा ललितपुर पिपि इन्भेस्टमेन्टले व्यापार प्रयोजनको लागि पेश गरेको नक्शा पास गरेका थिए र लगत्तै बदर पनि गरेका थिए । रामजानकी मन्दिरको जग्गा सार्वजनिक भएको भनी वीउमनपाले उठाएको कदम अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतको निर्णयपछि वीउमनपाले सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोराइपाउँ गर्न गइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । अहिले रामजानकी मन्दिरको जग्गा भनि
निजगढमा दोस्रो राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुरु
प्रस, निजगढ, १६ जेठ/ निजगढमा दोस्रो राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता मङ्गलवारदेखि शुरु भएको छ । सो प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवराज लामाले एक समारोहबीच गरे । विद्यालयहरूका पाठ्यक्रममा समावेश गरी खेल क्षेत्रलाई अझ सशक्तरूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै मानिस स्वस्थ हुन सके मात्र सकारात्मक सोच, विकास र अन्य कार्य गर्न सक्ने बताए । जुनसुकै क्षेत्र, नगर, बस्तीमा भएका खेलमैदानहरूको स्तरोन्नति गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके मात्र खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूलाई सुविधामा सहजता पुगी खेलाडीहरूको मनोबल उच्च हुनुका साथै गुणस्तरीय खेलाडी उत्पादन भई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने पूर्व सदस्य सचिव लामाले भने । आजको युगमा विकासको नाउँमा खेल क्षेत्रलाई कसैले पनि पछाडि पार्न नहुने भन्दै नजिकिंदो निर्वाचनमा जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवार विजयी भए पनि खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको हौसला बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताउदै प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै खेलाडीहरूले खे
शिक्ष्Fकको ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको महŒव
भरत सहनी नेपालमा किराँतकालीन समयदेखि नै शिक्षाको शुरूशात भए पनि त्यो बेलाको शिक्षा केवल दरबारभित्र मात्र सीमित हुन्थ्यो । वि.सं. १८०१ मा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखामा सैनिकका छोराछोरीलाई शिक्षा दिने क्रम अगाडि बढाएको देखिए तापनि विभिन्न युद्धका कारण त्यसबेला शिक्षामा खासै प्रगति हुन सकेन । जब जङ्गबहादुर राणाले कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वजस्ता नरसंहारबाट राणा शासनको उदय गराए त्यसपछि उनले वि.संं. १९१० असोज २७ गते औपचारिकरूपमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको बीजारोपण गराएका थिए । तत्पश्चात् वि.सं. १९१५ मा पहिलो पटक नेपालमा शिक्षा विभागको स्थापना भयो र राणाका छोराछोरीले शिक्षा आर्जन गर्न पाए । त्यसैगरी वि.सं. १९४२ देखि सर्वसाधारण जनताका छोरीछोरीले पनि शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाए र त्यसका लागि केही स्थानमा विद्यालय स्थापनासमेत भए । तर आर्थिकरूपले सम्पन्न तथा पहुँच हुनेका छोराछोरीका लागि मात्र विद्यालय जान सम्भव हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् नेपालमा वि.सं. २०१२ देखि व्यवस्थितरूपमा शिक्षा अगाडि बढेको र सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय, क्षेत्री
पत्रकारमा सुधारको आवश्यकता
पत्रकारहरूको सुरक्षालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासङ्घ र इन्टरनेशनल एलर्टको सहकार्यमा गठन भएको फ्री मिडिया नेटवर्कको दुई दिने अन्तक्र्रिया वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र इन्टरनेशनल एलर्टको सहकार्यमा फ्री मिडिया नेटवर्क देशभरिको ५ स्थानमा गठन गरेर काम गर्दै आएको छ । खासगरी तराईमा मधेस आन्दोलनपछि स्थानीय पत्रकारहरूको सुरक्षा सवाललाई लिएर सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नेटवर्क गठन भएको हो । पत्रकारिता गर्दा हुने असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्ने र पत्रकारहरूलाई सम्भावित दुर्घटना, आक्रमणबाट जोगिन सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेटवर्क गठन भएको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क हेर्ने हो समाचार लेखेकै कारण दुर्घटना, आक्रमणका घटना न्यून छन् । कुनै सन्दर्भ विशेषमा असुरक्षाको वातारण सृजना हुने गर्छ यो कुरालाई नकार्न सकिन्न । जस्तै माओवादी जनयुद्धको बेला, लिम्बूवान–खम्बूवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिमा पत्रकारलाई टारगेट बनाएर आक्रमण हुने, दुव्र्यवहार गरिने, धम्की दिने र हत्यासम्म गरिएको घटनाहरू नदेखिएको होइन । अहिले पनि समाचार लेखेको विषयलाई लिएर आक्रमण नहुने होइन । समाचार मात्रल
२०७४ जेठ १६ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा ११ गाउँपालिका तथा २ नपामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
प्रस, वीरगज, १५ जेठ/ दोस्रो चरणको चुनावका लागि पर्सा सहितका जिल्लाहरूमा आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । दोस्रो चरणको चुनाव हुने चार सय ६१ तहमध्ये चार सय २० तहमा आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको र बाँकी तह जिल्ला सदरमुकाममा रहेकाले ४१ ठाउँमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नै निर्वाचन अधिकृतको पनि भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पर्साका दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा पनि आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । आजदेखि स्थापना गरिएका जिल्लाका सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारी खटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि आउँदो २८, २९ र ३० गते सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन २७, २८ र २९ गते मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदाता परिचयपत्र ल
१० औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पर्सामा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ३४ जना कैदी पर्सा कारगारबाट रिहा १० औंं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वीरगज कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका मध्ये ३४ जना कैदी आज रिहा भएका छन् । वीरगंज कारागार व्यवस्थापनले ५० जना कैदीको बाँकी कैद माफ गरी रिहा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि ३४ जना मात्र आज रिहा हुने भएका छन् । कारागारमा कार्यक्रमको आयोजना गरी तीनजना महिलासहित ३४ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको वीरगंज कारागारका प्रमुख चक्रपाणी गौतमले बताए । रिहा हुनेहरूमा अश्वेसर पटेल, दशै चौधरी, दरोगा कुर्मी, ध्रुव पटेल, जङ्ग बहादुर कुर्मीलगायत रहेका छन् । कर्तव्य ज्यान, डाँका, हातहतियार तथा खरखजाना र चोरी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका ३४ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरी आज रिहा गरिएको जेलर गौतमले जानकारी दिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले हरेक वर्ष चेलीबेटी बेचबिखन, जघन्य अपराध, देशद्रोह, लागू औषध, मुद्रा अपचलनलगायत १३ वटा मुद्दाबाहेक अन्य मुद्द्रामा ४० प्रतिशत कैद सजाय भोगिसकेका कैदीहरूलाई राम्रो आचरण र बानीव्यवहोराको मूल्याङ्कन गरेर बाँकी कैद सजाय माफ गरी रिहा गर्दै आएको छ
राजनीतिक स्थायित्व र वीरगंजको चुनौती
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव ०६२–२०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट भयो । सो घोषणाको दिनदेखि गत वैशाख ११ गते एक दशक पुगेको छ । यो एक दशकमा मुलुकले धेरै परिवर्तन भोगेको छ । परिवर्तनको एक दशकपछि उपलब्धि संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हेर्दा ठूलो उपलब्धि देखिए पनि जनतामा हर्ष न विस्मात छ । निरङ्कुश भनिएको समयमा कमसेकम नागरिक एकता र सामाजिक सद्भाव थियो । जुन यतिखेर भताभुङ्ग भएको छ । संविधान आए पनि कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा छ । सर्वस्वीकार्यता अप्ठ्यारोमा परेको छ । गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शक्तिमा एकता छैन । आगामी माघसम्मको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यस अवधिमा सङ्घीय संरचना पूरा भई सबै तहको चुनाव सम्पन्न हुनैपर्छ तर एउटा स्थानीय चुनाव गराउनमैं सरकार लरखरिएको छ । ३४ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भए पनि बाँकी जिल्लाको चुनाव हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा त छ नै, सरकार नै परिवर्तन भइसकेको छ । मधेसवादी एउटा पक्ष चुनाव हुनै नदिने अडानमा छ भने अर्को शक्ति चुनाव हुनुपर्छ भन्छ । यस पृष्ठभूमिमा जिल्ला आउँदो वर्ष दिनसम्म गणतन्त्र रहने हो कि स
द्रुतमार्गको शिलान्यास शुभसङ्केत
बारामा घोषित राष्ट्रिय योजनाका दुई महŒवपूर्ण काम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दु्रतमार्गमध्ये लामो समयपछि बल्ल आइतवार निजगढ–काठमाडौं जोडने दु्रतमार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरेका छन् । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेको सरकारले सेनालाई यो जिम्मेवारी सुम्पिन पनि तीन वर्ष ढिला ग¥यो । ७६ किलोमिटर दु्रतमार्ग निर्माणका क्रममा सेनाले ०७० सालमा ट्र्याक खुला गरेको थियो । दु्रतमार्गका लागि ट्र्याक खुल्ला गरेको सेनाले तीन वर्षसम्म सरकारी निर्णय कुर्नुप¥यो । अहिले खोलिएको बाटो सञ्चालनमा मात्रै १० अर्बको हाराहारीमा बढी खर्च लाग्न जान्छ । समयमा यो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको भए १० अर्बको क्षति पनि हुने थिएन र अबको एक वर्षमा बाटो पनि सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो । तर यस्तो भएन र तीन वर्षको लामो विवाद, छलफल, सङ्घर्षपछि आखिरकार सेनालाई नै निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले दियो । पहाड २३ किमि र बाँकी ५३ किलोमिटर तराईको भूभाग रहेको द्रुतमार्गको निर्माण चार वर्षमा पूरा गर्नेगरी सेनाको जिम्मामा दिइएको छ । यस अघि यो योजनामा काम गर्न नेपाली राजनीतिक
२०७४ जेठ १५ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा दु्रतमार्गको शिलान्यास
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १४ जेठ/ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतवार फास्ट ट्र्याक अर्थात् दु्रतमार्गको शिलान्यास गरेका छन् । पूर्व—पश्चिम राजमार्गको निजगढबाट निस्कने दु्रत मार्ग शिलान्यास कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले शिलान्यास गरेका हुन् । “तराई, पहाडलाई जोडने बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित आयोजना फास्ट ट्र¥याक अर्थात् दु्रतमार्ग निर्माणका लागि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आज आपूmले शिलान्यास गर्न पाउँदा निकै गौरव व्यक्त गर्दछु । यसले विकासका कार्य हुने त छँदैछ । यो मार्गले दूरी, समय घटाएको छ । राजधानी काठमाडौं–तराईमधेसलाई जोडने काम त गरेकै छ । त्यसभन्दा पनि बढी तराई–मधेस, पहाड, हिमालको मन र भावना जोडने ऐतिहासिक काम गर्नेछ । जसले गर्दा यसले अझै दूरगामी महŒव राख्नेछ”— दाहालले भने । आपूm यसपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विमतिहरू सहमतिमा ल्याउने, संविधानको स्वीकार्यता बढाउने, आर्थिक विकासलाई गति दिने सङ्कल्प गरेको थिएँ । थुप्रै अप्ठ्यारा र चुनौतीबीच पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रको एकताको पक्षमा र राष्ट्रको सम
रु २ करोड भ्याट चोरीको रहस्योद्घाटन
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ राजस्व अनुसन्धान विभाग, काठमाडौंको टोलीले आदर्शनगरस्थित एउटा अडिट फर्ममा छापामारी गरेको छ । प्रदीपकुमार वर्माको नाममा दर्ता रहेको अडिट फर्मले रु २ सय करोड बराबरको राजस्व चोरी गरेको प्रमाण भेटेपछि टोली वीरगंज पुगेको हो । टोलीको नेतृत्वकर्ताले गौर निवासी सन्तोष श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तवले बारा, पर्साका केही व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गर्ने र सादा भ्याट बिल १० प्रतिशत कमिशनको भरमा दिने गरेको र सोबापत राज्यलाई रु २ सय करोड घाटा भएको बताए । अडिट फर्मका काठमाडौं प्रतिनिधि राजेश श्रीवास्तवले काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, विभिन्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, ठेकेदार कम्पनीलगायत विभिन्न संस्थामा सो भ्याटबिल दिने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं बस्दै आएका राजेश श्रीवास्तव पक्राउ परेपछि टोलीले वीरगंज, आदर्शनगरमा सो अडिट फर्ममा छापामारी गर्दा काम गरिरहेको अवस्थामा नाइके सन्तोष श्रीवास्तव र सहायक वीरेन्द्र बैठालाई नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । गिरोह सञ्चालक दीपक श्रीवास्तव फरार रहेको टोलीका एकजना कर्मचारीले बताए । उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा श्रीवास्तवले बाँडेको नक्क
स्थानीय सरकारमा पुग्न निर्वाचनमा गयौं –उपेन्द्र यादव
नेकपा एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पद त्याग गरी भर्खरै सङ्घीय समाजवादी फोरम पार्टी पर्सामा प्रवेश गरेका प्रह्लाद गिरीले एक पक्षीय राष्ट्रवादका कारण एमाले पार्टी मधेसी जनताबीच अपहेलित भएका बताएका छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हातबाट पूmलमाला, अबीर लगाई पार्टी प्रवेश गरेका गिरीले जब पार्टी छाडने कुरा सार्वजनिक भयो, एमालेका नेता रघुवीर महासेठले एमाले अध्यक्ष केपी ओली कहाँ लिएर गए । काठमाडौंमा दुई घण्टा छलफल चल्यो, केपीको एउटै कुरा थियो, तपाईंहरू पार्टीमा फर्किनुस् । मैले एउटै प्रश्न गरें–तपाईंको एकात्मक राष्ट्रवादले के साँच्चै देशलाई फाइदा गर्दैछ । उनी नाजवाफ भए । त्यसपछि जति दबाब आउँदा पनि मैले एमाले छोडने निर्णय गरिसकेको थिएँ, छोडें । अब मधेसी पार्टीबाटै मधेसीको मुक्तिको लागि लडछु । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रद्युम्न चौहान, करिना बेगम, हरिनारायण रौनियार, सलाउद्दीन अहमदलगायत नेताहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा पोखरिया आसपासबाट हजारौंको सङ्ख्यामा लस्करसहित जुलुस वीरगंज आएको थियो । प्र
चुनावको समर्थनमा तयारी, विरोधमा प्रदर्शन
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ पर्सा जिल्लामा दोस्रो चरण निर्वाचनको एकथरी तामझामका साथ प्रचारप्रसारमा लागेको छ भने अर्कोथरी विरोध र बहिष्कारमा लागेको छ। राजपा नेपालसँग आबद्ध कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आप्mनो उम्मेदवारीको दाबेदारी गर्दै आएकोमा पछिल्लोपटक राजपाले आन्दोलन घोषणा गरेपछि दाबेदारीको चर्चा साम्य भएको छ । यसैगरी टोल–टोलमा आआप्mनो उम्मेदवारीको चर्चा गर्दै मत माग्दै आएका राजपाका कार्यकर्ताहरू अहिले लुकीछिपी सो कार्य गर्दैछन् । केही कार्यकर्ताहरू राजपा चुनावमा सहभागी हुने नभएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अथवा चुनावमा सहभागी हुने अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि देखिएको छ । यता नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्सामा चुनावी तयारीमा लागेको छ । हुनत सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले सर्वोच्चको पैmसलापछि खुलारूपमा चुनावी प्रचारमा नलागेको बताएका छन् । उनले आन्तरिक तयारीमा जुटे पनि खुलारूपमा चुनाव अभियानमा नलागेको बताए । उनले यस सन्दर्भमा एकाध दिनमा केन्द्रीय निर्णय अनुरूप चल्ने प्रतीकलाई बताएका छन् । एमा
टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको लाइफ म्यानेजमेन्ट हो
अनन्तकुमार लाल दास समय कसैको लागि पर्खंदैन । समयलाई रोक्ने शक्ति पनि कसैमा छैन । समयानुसार आवश्यक र सही कामलाई पूरा गर्नु नै समयको सदुपयोग हो । विद्यार्थी जीवनमा नै मानिसहरू आप्mनो भावी जीवनको तयारी गर्छन् । मानसिक र शारीरिकरूपले आपूmलाई सक्षम बनाउँछन् । जसले विद्यार्थी जीवनमा समयको सदुपयोग नगरेर अन्य काममा समय खेर फाल्छ, ऊ आप्mनो गृहस्थ जीवनमा सधैं असफल हुन्छ । ऊ शारीरिक दृष्टिले पनि कमजोर र कठिनाईहरूको शिकार हुन्छ । समयको सदुपयोग गर्ने विद्यार्थीको भावी जीवन सङ्कटहीन र प्रगतिपथमा निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ । भारतीय कवि रहीमले भनेका छन्–“समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक/चतुरन चित्त रहिमन लगी, समय चूक की हूक” अर्थात् समय नै लाभ हो र समय नै हानि पनि हो । चलाख मानिसहरू समयबाट लाभान्वित हुन्छन् र जसले समयको सदुपयोग गर्दैन उसको मनमा सधैं डरको बास हुन्छ ।” समय खेर फाल्ने विद्यार्थीको मन चञ्चल हुन्छ । यस्तो विद्यार्थी कुनै पनि कामलाई राम्ररी गर्न सक्दैन । यस्ता विद्यार्थीहरू उद्दण्ड हुन्छन् । उनीहरूमा कार्य गर्ने भावना र क्षमताको कमी हुन्छ । उनीहरू न ज्ञानार्जन गर्न सक्छन्, न धन
दुनियाँमा मुख्यतः दुईवटा मात्र राजनीतिक विचारधारा छ । एउटा प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक व्यवस्था र अर्को साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था । समयक्रममा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था हराउँदै गइरहेको छ । जे छ, त्यसको पनि रूप परिवर्तन भएर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था हो कि होइन भन्ने आशङ्कामा छ । यद्यपि यी दुई राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मानक खोज्ने हो पनि कहीं पाइँदैन । सबै देशले आप्mनो समय, काल, परिस्थिति अनुसार केही न केही फेरबदल गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दै अहिले सङ्घीय गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ र जेठ १५ गते नेपालको गणतन्त्र दिवस हो । गणतन्त्र भनेको गण अर्थात् जनताको तन्त्र वा शासन व्यवस्था हो । यद्यपि गणतन्त्र अहिले शब्दमैं सीमित छ । अहिले शासन व्यवस्था राजनीतिक दलहरूले चलाइरहेका छन् । जनताको ठ्याम्मै सरोकार छैन । जनताको सरोकार तब शुरु हुन्छ, जब निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि छानिन्छ । देश गणतान्त्रिक भएपछि निर्वाचन भएको छैन । दुईपटक संविधान निर्माणका लागि निर्वाचन भयो । जसले देशलाई गणतान्त्रिक संविधान दियो ।
२०७४ जेठ १४ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
राजपा नेपालद्वारा मसाल जुलुस प्रदर्शन, संशोधन बिना चुनाव हुन नदिने चेतावनी
प्रस, वीरगंज, १३ जेठ/ संविधान संशोधनलगायतको माग राखेर आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आज घोषणा गरेको मसाल जुलुस वीरगंजलागयतको क्षेत्रमा निकालिएको छ । वीरगंज घण्टाघरलगायत विभिन्न स्थानबाट मसाल जुलुस निकालिएको थियो । मसाल जुलुस नगरपरिक्रमा गरी माईस्थान चोकमा कोणसभा गरेको थियो । कोणसभामा बोल्दै राजपा नेपालका महासचिव शिव पटेलले संविधान संशोधनबाट मधेसीको माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी रह्ने बताए । उनले मधेसीको मागसँग पटकपटक खेलवाड भएको र पछिल्लोपटक पनि पहिलो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन मार्पmत् माग संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर धोखा गरिएको आरोप लगाए । उनले सरकारले गाउँपालिका वृद्धि र उपमहानगरपालिकाकालाई स्तरोन्नति गरी महानगर बनाउँदा वीरगंजमा खुशीयाली मनाएका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि त्यसको विरोध गर्नु नसक्नु दुःखद भएको बताए । राजपा नेपाल पर्साका संयोजक पुरुषोत्तम झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोणसभामा राजपाका नेताहरू शशीकपुर मियाँ, नेजामुद्दिन समानीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी पोखरियामा पनि मसाल जुलुस प्रदर
अज्ञानताको कारण बाराका किसान मर्कामा
प्रस, सिम्रौनगढ (बारा), १३ जेठ/ सिम्रौनगढ इलाकामा लगाइएको चैते धानमा रोग देखा परेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन् । किसानहरूले लगाएको धानको पात पहेंलो हुने, विस्तारै कुहिएर जानेजस्ता समस्या देखा परेको अमृतगंजका किसान विजय कुशवाहाले बताए । किसानहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा नगई विभिन्न ठाउँमा खोलिएका औषधी पसलहरूमा गई सल्लाह सुझाव लिने र औषधीसमेत पसलबाटै लिने गरेका कारण धानमा समस्या देखा परेको बुझिएको छ ।
शहीद परिवार भन्छ ः आयोगप्रति विश्वास छ, सरकारप्रति छैन
प्रस, वीरगंज, १३ जेठ/ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले मधेस आन्दोलनको क्रममा पर्सामा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेहरूका परिवारसँग बयान लिने कार्य शुरु गरेको छ । आज आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको टोलीले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका पर्सा पकहा मैनपुरका शत्रुघ्न पटेल र रूपन्देहीको बेथरिमा प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका पोखरिया नगरपालिका बनकटवाटोलका ५ वर्षे बालक चन्दन पटेलको घर पुगी अभिभावक तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान लिएको हो । टोली समक्ष मृतकका परिवार तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूले प्रहरीले जानीजानी गोली हानेर हत्या गरेको हुँदा त्यस्ता प्रहरी र अधिकृतलाई कारबाईका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । अधिकारको लागि लडिरहेको बेला दूधेबालक चन्दनलाई प्रहरीले जानीजानी गोली हानेको बुवा रामाशिष पटेलले बताएका थिए । उनले आयोगको निष्पक्ष छानबिन प्रति विश्वस्त रहेको बताउँदै सरकारले दोषी प्रहरीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गरे । पकहामैनपुरका शहीद शत्रुघ्न पटेलकी आमा कुसुम देवीले छोराको मृत्युपछि घर चलाउन मुश्किल परेको बताउँदै हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाई नभएसम्म
मधेसको सकस ः सुल्झाउने कि बल्झाउने ?
ओमप्रकाश खनाल अहिलेको अर्थ–राजनीति दुईओटा विषयमा बढी केन्द्रित छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र आगामी वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सरोकारका पक्षको चासो समेटिएको छ । सरकारले आउँदो वर्षका लागि आप्mनो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई कारण देखाउँदै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर ल्याइएको पूर्ण आकारको बजेटप्रति अपेक्षाहरूको पनि कमी छैन । मुलुक पहिलोपटक सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको अभ्यासमा गइराखेकोले यसको व्यवस्थापनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने जिज्ञासा अस्वाभाविक होइन । संविधानप्रति बढी असन्तोष देखिएको मैदानी भूभागले पनि बजेटलाई निकै चासोका साथ नियालिराखेको छ । तर सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमबाहेक सङ्घीय संरचना व्यवस्थापनका योजनाहरू खासै आएनन् । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले नीति र कार्यक्रम नै ल्याउन नहुने तर्क पनि नसुनिएको होइन । पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइराखेको सन्दर्भमा त्यसको निर्देशक आधार मानिएको कार्यक्रम चाहिं ल्याउन नमिल्ने तर्कमा तुक भने देखिन्न । यसर्थ यो रचनात्मक आलोचनाभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहको उत्पादन मात्र हो ।
गताङ्कको बाँकी मोक्ष मोक्ष या परमार्थमा मुख्य विचार आत्मसुखको हो । आत्मसुखको लागि कसैको पनि आवश्यकता छैन । सुखको हाम्रो परिभाषा र सन्तको परिभाषामा जमीन–आकाशको फरक छ । यस कारण केही नीतिज्ञ व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ–जब उनीहरू धनवान् छन्, पढेलेखेका, वैभवयुक्त, सफल, कीर्तिशाली्, बच्चा पनि होनहार छन्, सङ्क्षेपमा सबै कुरा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै छ भने आत्मसुख किन चाहियो ? यस्तै विचारबाट यस्तो धारणा बन्दछ कि परमार्थ गरिब वा दरिद्र व्यक्तिको अभीष्ट हो । समाजले जसलाई त्यागिदिएको छ, उसैले परमार्थको बाटो लाग्नुपर्छ– यस्तो धारणा पूर्णतया गलत हो । समर्थ स्वामी रामदासजीले आप्mनो दासबोध ग्रन्थमा स्पष्टरूपले समाजसँग सोधेका छन्– जसले पेट भर्न रोटी पाउँदैन, त्यो अभागीले के परमार्थ गर्छ ? प्रश्नोपनिषद्मा एउटा कथा छ जसमा ६ शिष्य परमार्थ प्राप्तिको लागि श्रीगुरुकहाँ पुग्छन् । ती सबै जीवनमा सफल र सम्पन्न थिए । उनीहरू दरिद्र, माग्ने, काम नलाग्ने, बेकार, पराजित, दीन, अनपढ, बहिष्कृत, निराश, थाकेका–हारेका र दुर्बल थिएनन् । सामान्य विचारधारा अनुसार उनीहरूलाई परमार्थसँग केही लिनुदिनु थिएन तर वास्तविक सुख केवल